I-Moate Lodge B&B - IntoKildare
I-Moate Lodge iyindlu yasepulazini yaseGeorgia eneminyaka engu-250 emaphandleni aseKildare futhi iyindawo yokuthula nokuthula eduze kwase-Athy. Iphethwe futhi iqhutshwa nguRaymond noMary Pelin. Ukwamukela izihambi kwendabuko kwase-Ireland kuhlanganiswe nokunaka komuntu siqu kuqinisekisa ukunethezeka nokuphepha kwakho.
Yakhiwe nguDuke waseLeinster, iMoate Lodge isukela ngo-1776 futhi itholakala ekugcineni kwendlela ende yangasese eholela ngaphambili kwendlu. Wonke amagumbi okulala e-en-suite amahle angu-4 aklanywe ngokunethezeka kwakho engqondweni futhi anempahla yakudala.
Lala ilineni elicokeme kakhulu lombhede futhi uvuke ubone umbono omuhle wohlangothi lwezwe. Bese ukhetha ukudla kwakho kwasekuseni okulungiselelwe okusha okunikezwe endlini yokudlela egcwele ilanga. Imenyu yethu yasekuseni ebanzi inikezwa kusukela ngo-7.00 kuya ku-10.30 ekuseni futhi ihlanganisa izithelo ezintsha, iyogathi, ushizi, izinkwa zasekhaya, okusanhlamvu, uphuthu, amaqanda e-organic avela epulazini kanye nesidlo sasekuseni esigcwele sodumo sase-Ireland, ngokuthinta komuntu siqu okwengezwe okwenza usuku ngalunye lube olukhethekile.
Izivakashi zamukelekile ukuthi zizulazule epulazini. Kuningi kakhulu uRaymond angakutshela kona ngomlando wendawo, iMpi Yombango YaseMelika, Impi Yezwe 2 kanye Nombhoxo Wase-Ireland kangangokuthi kuzodingeka ukuthi uze uzozizwela Ilabhulali yakhe yempi.
Indawo yokulala nokulala kwasekuseni, isabelomali, I-Pet Friendly, Umndeni Friendly, 3 Star, Umjaho
Umjaho, Isifunda iKildare, Ireland.